इन्टरप्राइज एनालिटिक्सलाई WordPress मा ल्याउँदै | Martech Zone
इन्टरप्राइज एनालिटिक्सलाई WordPress मा ल्याउँदै
बिहीवार, जनवरी 14, 2010 शुक्रवार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
पछिल्ला दुई महिनादेखि, म शीर्ष गोप्य प्रोजेक्टमा काम गर्दै छु जुन रमाईलो छ। वेबट्रेंड्स मेरो ग्राहक हुन् जो हामी प्रति लिड लागत घटाउने, रूपान्तरण दर बढाउन र अनलाइन दृश्यता सुधार गर्न सहयोग गर्दैछौं (मलाई थाहा छ त्यो सामान्य हो ... तर यी केटाहरू अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बजारमा छन्!)। इन्टर्प्राइज व्यवसायहरूको उच्च संख्याको साथ वर्डप्रेस प्रयोग गर्दै, यसले यो बनायो कि वेबट्रेंडहरूले एक एकीकृत प्रस्ताव प्रदान गर्नेछ ... त्यसैले हामीले यसलाई निर्माण गर्‍यौं।
वेबट्रेंड्स प्लगइन तपाईंको जोड्न केवल एक छोटी सी प्लगइन होइन विश्लेषण तपाईंको फुटरमा कोड - त्यो सजिलो हुने थियो। यसको सट्टा, हामी वेबट्रेंड्सलाई अविश्वसनीय लियौं विश्लेषण WordPress ड्यासबोर्डमा!
परियोजना को यो चुनौतीहरु थियो! जबकि वेबट्रेंडहरू एपीआई मैले प्रयोग गरेको सर्वश्रेष्ठ मध्ये एक हो (प्राप्त गर्न तपाईंको एनालिटिक्स अनुप्रयोगमा बटन थिच्नुहोस् एपीआई कल गर्नुहोस्), अद्वितीय प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस प्रदान गर्न कोशिस गर्दै जुन WordPress सँग मिल्दोजुल्दो थियो तर मलाई लाग्छ हामीले यसलाई नखारेका छौं। त्यहाँ एक सेटिंग्स पृष्ठ छ जहाँ तपाईं भर्नुहुन्छ एपीआई विवरणहरू र तपाईंको खाता चयन गर्नुहोस् ...। र तपाइँ तयार हुनुहुन्छ र चलिरहनुभएको छ!
ड्यासबोर्ड पनि १००% एजेक्स हो जुन पृष्ठ लोड समयलाई न्यूनतममा राखिएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न संचालित छ। यो WordPress को 'Ajax सुरक्षा मोडेल (त्यहाँ एक सानो व्यंग्य, तर म राम्रो एक हुनुपर्दछ भनेर आवश्यकता गर्दछ!) को माध्यमबाट काम गर्न पाउँदा खुसीको कुरा थियो।
अवश्य पनि, प्लगइनले आवश्यक फुटर जाभास्क्रिप्ट र noscript कोड थप गर्दछ (नि: शुल्क वेबट्रेंडको ठूलो फाइदा विश्लेषण कि तपाईं अझै जाभास्क्रिप्ट बन्द संग मान्छे ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ)। यसले पृष्ठहरू पनि ल्याउँछ जुन सबैभन्दा लोकप्रिय हो, साथै वेबट्रेंड्सको ट्वीट स्ट्रिम, ब्लग पोष्टहरू र समर्थन स्ट्रिम पनि। वेबट्रेंडहरू वास्तविक-समय कार्यक्षमतामा पनि सर्दै छन् ... यो इन्टरप्राइज ब्लगरहरूको लागि उत्कृष्ट हो।
तपाईं हुनुहुन्छ भने वेबट्रेंडहरू ग्राहक र हामीसँग बीटा परीक्षण गर्न चाहन्छ, कृपया मलाई जानकारी दिनुहोस्। तपाईको सर्वरले PHP ++ चलाउन आवश्यक पर्दछ एपीआई कलहरू पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ! हामी यहाँ प्लगइनको बारेमा बढी कुरा गर्ने छौं सन् २०१०!
अद्यतन: मैले त्यो भन्न बिर्से ओले लौरसन टीमलाई पनि सहयोग पुर्‍यायो। Ole ले हामीलाई प्लगइनको साथ उचित रूपमा FLOT एकीकृत गर्न मद्दत गर्‍यो। फ्लोट खुला स्रोत हो jQuery आधारित रिच चार्टिंग इञ्जिन। म दु: खी छु म Ole उल्लेख गर्न बिर्सनुभयो! उहाँसँग काम गर्न अद्भुत थियो।
टैग: वेबट्रेंडहरूवेबट्रेंड्स WordPressWordPress प्लगइन
तपाईंको सफल व्यक्तिगत ब्रान्डको5कुञ्जीहरू
राजनीतिमा ब्रान्डि and र आइकनोग्राफी
जनवरी 14, 2010 मा 5: 55 एएम
डग - यो राम्रो देखिन्छ - राम्रोसँग गरियो
यो उपलब्ध हुँदा प्लगइन प्रयास गर्न मनपर्छ
जनवरी 14, 2010 3:08 बजे
धन्यवाद पाउल! यो एक रमाइलो थियो ... साथै वृद्धि जारी राख्न धेरै अवसर। Webtrends सँग उत्कृष्ट API छ, यसले यसलाई धेरै सजिलो बनायो। सबैभन्दा कठिन भाग अन्तर्क्रियात्मक चार्टिङ निर्माण गरिरहेको थियो (तपाईले माउसओभर बिन्दुहरू गर्न सक्नुहुन्छ)। 😀
जनवरी 15, 2010 मा 3: 26 एएम
अविश्वसनीय काम। यो डिजाइन/समाधान धेरै चलाख छ। यसलाई प्रयास गर्न प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्न।
जनवरी 21, 2010 मा 8: 40 एएम
म तपाइँको WordPress प्लगइन प्रयास गर्न चाहन्छु। मसँग धेरै ब्लगहरू छन्। सँधै केहि नयाँ मा रुचि। म ग्राहक होइन तर तिनीहरूको ब्लगमा एउटा पोष्ट देखेँ कि यदि यो प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने म तपाईंलाई यहाँ टिप्पणी छोड्न सक्छु। मलाई मात्र थाहा दिनुहोस्।
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::15। बिहान
मेरो नाम भिट्टोरियो हो,
म इटालीमा ENEL को लागि काम गर्छु जसले वेबट्रेन्डहरूसँग सहकार्य गर्छ र हामी बिटा परीक्षणको रूपमा सेवा गर्न इच्छुक छौं।
म यो कसरी गर्न सक्छु?
मार्क्स 1, 2010 मा 6: 37 PM
यदि तपाईं दयालु हुनुहुनेछ भने म प्लग-इनमा एक नजर लिन चाहन्छु। मैले WebTrends र WordPress चलाउने केही ग्राहकहरू पाएको छु जुन यो मनपर्छ। के यो कतै डाउनलोड गर्न को लागी उपलब्ध छ?
मार्स 18, 2010 मा 1: 27 एएम
यो राम्रो सुनिन्छ। मसँग WordPress मा चलिरहेको प्रोजेक्ट छ जसलाई WebTrends पनि चाहिन्छ, के यो प्लगइन डाउनलोड गर्न सम्भव छ?
अप्रिल 14, 2010 मा 3: 25 PM
यो राम्रो देखिन्छ। के तपाइँ अझै बिटा प्लग-इन परीक्षण गर्न मानिसहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? म यसलाई हाम्रो WordPress MU स्थापनामा प्रयास गर्न चाहन्छु।
अप्रिल 20, 2010 मा 3: 56 एएम
एकीकरण धेरै आशाजनक देखिन्छ। हामी (ramboll.com मा) यसलाई परीक्षण गर्न सक्षम हुन चाहन्छौं। हामीसँग अहिले फायरवाल भित्र ब्लगहरू मात्र छन्, तर एक पन्ध्र दिन भित्र बाहिरी ब्लगहरू सुरू गर्दैछौं। के त्यहाँ हामीले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्ने ठाउँ छ, वा तपाईं अन्तिम संस्करण जारी गर्न नजिक हुनुहुन्छ?
जुन 19, 2010 मा 3: 02 PM
धेरै राम्रो! म बिटा परीक्षण गर्न चाहन्छु। मसँग धेरै साइटहरू छन् जुन हामीले वेब ट्रेन्डहरूसँग ट्र्याक गर्छौं।
जुन 17, 2011 मा 12: 22 PM
मलाई यो ब्लगमा लेखहरू पढ्न साँच्चै आनन्द लाग्छ। लेख धेरै रोचक थियो। म यो अद्भुत पोस्टको कदर गर्छु।
जुन 27, 2012 मा 4: 48 PM
नमस्ते डग - मलाई तपाईंको प्लगइनमा रुचि छ। के तपाइँ अझै यो विकास गर्दै हुनुहुन्छ? के यो WordPress प्लगइन भण्डारमा छ? कुनै मिति नभएकोले यो लेख कत्तिको हालको छ भन्न गाह्रो छ, तर म आशा गर्छु कि यो हालको प्लगइन हो जुन तपाईंले अझै समर्थन गरिरहनु भएको छ। कुनै पनि जानकारी मद्दत हो - अग्रिम धन्यवाद!
सेप्टेम्बर 18, 2015 मा 10: 52 AM
हेदर, तपाईंले सबैभन्दा भर्खरको टिप्पणी गर्नुभएको याद गर्नुभयो। के तपाइँ यस प्लगइनको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो?
सेप्टेम्बर 18, 2015 मा 10: 51 AM
डग, यो प्लगइनमा कुनै अद्यावधिकहरू छन्? हामी यस्तै केहि विकास गर्ने प्रक्रियामा छौं, थाहा छैन यदि तपाइँ यसलाई सार्वजनिक रूपमा वा बिक्रीको लागि पनि प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ।
सेप्टेम्बर 18, 2015 बेलुका 12:38 बजे
यदि तपाइँ एक WordPress विकासकर्ता हुनुहुन्छ भने, म तपाइँलाई लेखकको रूपमा थप्न र तपाइँलाई यसलाई लिनको लागि इमानदारीपूर्वक मनपर्छ!